नक्कली आगलागीको पोल खुलेपछि विवादमा अरवपति विनोद चौधरी, २४ करोड तिर्नुपर्ने उच्च अदालतको निर्णय !
ARCHIVE, INSURANCE, INVESTIGATION, SPECIAL » नक्कली आगलागीको पोल खुलेपछि विवादमा अरवपति विनोद चौधरी, २४ करोड तिर्नुपर्ने उच्च अदालतको निर्णय !
काठमाडौँ- अर्वपति सुचीमा रहेका विनोद चौधरीको लगानीमा सतुङ्गलमा रहेको सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले बीमा दाबीमा किर्ते गरेको प्रमाणित भएको छ । गत हप्ता उच्च अदालत पाटनले सिजीले बीमा दाबीमा किर्ते गरेको भन्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्सलाई भरपाई गराएको २४ करोड रुपैयाँ असुल्न बीमा समितिलाई निर्देशन दिएपछी उनको यस्तो पोल खुलेको हो ।
विनोद चौधरी पछिल्लो समय धनी भएर पनि निकै विवादित व्यक्ति हुन् । सरकारलाई कर नतिरेको, गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थहरु बेचेको लगायतका आधा दर्जन बढी आरोपहरु उनीमाथि छ ।